Ohatrinona ny Whisky tsara? Ahoana ny amin'ny $60,000 ho an'ny Suntory
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ohatrinona ny Whisky tsara? Ahoana ny amin'ny $60,000 ho an'ny Suntory
Yamazaki 55 dia azo alaina amin'ny Global Travel Retail
Ny House of Suntory dia nampiditra habetsan'ny whisky Yamazaki 55 fanontana voafetra be ho an'ny Global Travel Retail, azo alaina amin'ny vidiny mitentina $60,000 USD.
Tavoahangy tamin'ny 2020, Yamazaki 55 no famotsorana tranainy indrindra an'ny House of Suntory teo amin'ny tantarany ary manome voninahitra ny fianakaviana mpanorina ny whisky japoney, raha mankalaza ny vanim-potoana Japoney "Showa" tamin'ny taona 1960.
Yamazaki 55 dia ho azo hisafidianana Global Travel Retail misy tavoahangy hita any Londres, Paris, Hainan, Hong Kong, Taipei, Amsterdam, Seoul, Delhi, Istanbul, Dubai ary Singapore.
Beam Suntory dia hanome $ 5,000 USD isaky ny tavoahangy navoaka tamin'ny fanangonana tavoahangy 100 tamin'ity taona ity, mitentina $ 500,000 USD, ho an'ny The White Oak Initiative, vondrona iray manolo-tena amin'ny faharetana maharitra ny ala oaka fotsy Amerikana.
Yamazaki 55 dia fifangaroan'ny malt tokana sarobidy, ahitana singa voadio tamin'ny 1960 teo ambany fanaraha-mason'ny mpanorina an'i Suntory Shinjiro Torii ary avy eo efa antitra tao amin'ny casks Mizunara; ary tamin'ny 1964 teo ambany fitarihan'i Keizo Saji, Master Blender Faharoa an'i Suntory ary avy eo dia efa antitra tao anaty vata White Oak.
Niara-niasa akaiky tamin'ny Master Blender Shingo Torii, Shinji Fukuyo, lehiben'ny andiany fahadimy an'ny Suntory, hametraka ny kanto fangarony sonia mba hanambarana tsara ny halalin'ny Yamazaki 55.
Ny ranon-javatra vokarina dia manana loko amber lalina; hanitra mafonja avy amin'ny hazo sanda sy voankazo masaka tsara; lanilany mamy, somary mangidy ary hazo; ary somary mangidy nefa mamy sy manankarena.
Manuel González, Talen'ny Marketing GTR ho an'ny Beam Suntory, dia nilaza hoe: “Tena mirehareha izahay manana fahafahana hanolotra zavatra miavaka sy miavaka toy ny Yamazaki 55, ilay fomba fiteny tranainy indrindra ao amin'ny House of Suntory. Ity vokatra fanontana voafetra be dia be ity dia haseho any amin'ny sasany amin'ireo toerana tsara indrindra ao amin'ny House of Suntory, ary hohamafisina amin'ny fanentanana fampahavitrihana mitambatra. Nanolo-tena izahay hampitombo ny Global Travel Retail amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny tolotra vaovao ataonay ary hitondra ny traikefan'ny mpividy premium tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay. ”
Ny 'Yamazaki' dia voasokitra amin'ny calligraphy amin'ny tavoahangy kristaly tsirairay, fa ny marika taona kosa dia asongadina amin'ny vovoka volamena ary voaaro amin'ny lacquer. Nofonosina taratasy Echizen washi vita amin'ny tanana ny fanokafana ny tavoahangy ary afatotra amin'ny tady vita amin'ny Kyo-kumihimo, asa tanana nentin-drazana avy any Kyoto. Ny tavoahangy tsirairay dia voarakitra ao anaty boaty manokana vita amin'ny hazo Mizunara japoney ary voarakotra amin'ny lacquer Suruga.